Ahoana ny fampidirana am-ponja ireo mpampiasa mampifandray amin'ny alalàn'ny SSH | Avy amin'ny Linux
Eto amin'ity tontolontsika ity dia misy be dia be ny tsiambaratelo ... Tsy marina ny eritreritro fa afaka mianatra ampy hahalalana ny ankamaroan'izy ireo aho, ary izany dia avy amin'ny zava-misy tsotra fotsiny fa mamela antsika hanao be dia be ny Linux, saingy zavatra maro izay sarotra ho antsika ny mahafantatra azy rehetra.
Amin'ity indray mitoraka ity aho dia hanazava ny fomba hanaovana zavatra tena mahasoa, zavatra iray mila mpitantana tambajotra na rafitra maro hatao, ary hitanay fa sarotra ny tsy mahita fomba tsotra fotsiny hanatanterahana azy:
Ahoana ny fomba hampiasana ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny SSH
Eny. Raha misy antony tsy maintsy anomezantsika SSH fidirana amin'ny namantsika amin'ny solosainantsika (na mpizara) dia tsy maintsy mitandrina hatrany isika amin'ny fiarovana sy ny fitoniana amin'ny solosaina na mpizara antsika.
Mitranga izao vao tsy ela izay izahay dia naniry ny hanome ny Perseus SSH fidirana amin'ny mpizara iray ao aminay, saingy tsy afaka manome azy karazana fidirana hafa satria manana fikirakirana tena mafampana eo izahay (nanangona zavatra maro, fonosana napetrakay tsirairay izahay sns. .) ary raha misy olona tsy manao na manandrana manova na dia kely aza amin'ny mpizara aho, dia misy ny mety hahafoana ny zava-drehetra hehe.
Avy eo, Ahoana ny fomba hamoronana mpampiasa manana tombony voafetra faran'izay voafetra, hany ka tsy afaka mivoaka ny tranony akory izy (tranony)?
Andao hanombohana amin'ny fisintomana jailkit, fitaovana ahafahantsika manao an'io:
Ireto baiko rehetra manaraka ireto dia mihodina ho faka
1. Voalohany dia tsy maintsy mampidina ny mpizara JailKit izahay.
2. Avy eo dia tsy maintsy esorintsika ny fonosana ary ampidiro ny fampirimana izay vao niseho:
3. Taty aoriana dia nanohy nanangona sy nametraka ilay rindrambaiko izahay (Avelako ianao pikantsary):
4. Vonona, efa napetraka io. Ary izao dia tohizantsika ny famoronana tranom-borona izay hisy mpampiasa ho avy, raha ny amiko dia noforoniko tamin'ny: / opt / ary nantsoiko hoe "fonja", ka ny làlana dia: / opt / fonja :
5. Efa noforonina ny tranom-borona, saingy tsy manana ny fitaovana ilaina rehetra izy io mba hahafahan'ireo mpampiasa ho avy izay ho eo miasa miasa tsy misy olana. Ny tiako holazaina dia hatramin'izao dia noforonina ny tranom-borona, fa boaty foana io. Ankehitriny dia hapetrakay ao anaty tranom-borona fitaovana vitsivitsy ilain'ny mpampiasa voafatotra:
6. Vonona, misy ny tranom-borona ary efa manana fitaovana hampiasan'ny mpampiasa izy ... izao ihany no mila ... ilay mpampiasa! Andao hamorona ny mpampiasa kira ary hataontsika ao anaty tranom-borona izy:
Fanamarihana: Ataovy anaty terminal ity baiko manaraka ity ary tokony hisy valiny mitovy amin'ilay aseho amin'ny pikantsary:
Raha tsikaritrareo fa tsy nisy toa ny pikantsary niseho dia tsy maintsy nanao zavatra tsy nety ianao. Mametraha hevitra eto ary hanampy anao amin-kafaliana aho.
7. Ary voila, efa voahidy ny mpampiasa ... saingy, voafatotra fatratra izy, ka tsy afaka mifandray amin'i SSH, satria rehefa manandrana mampifandray ny serivera dia tsy avelany izy:
8. Mba hamelana ny mpampiasa hifandray dia tsy maintsy manao dingana iray hafa isika.
Tsy maintsy manitsy ny rakitra sns / passwd an'ny tranom-borona isika, izany hoe, amin'ity tranga ity dia / opt / fonja / sns / passwd , ao no anehoanay hevitra momba ny tsipika mpampiasa noforoninay, ary manampy iray vaovao toy ny:
Izany hoe hanana an'io rakitra io isika passwd:
faka: x: 0: 0: root: / root: / bin / bash
#kira: x: 1003: 1003: ,,,: / opt / jail /./ trano / kira: / usr / sbin / jk_lsh
Jereo tsara ireo mari-piatoana fanontana sy ny hafa, zava-dehibe ny tsy hampidinanao na dia iray aza 🙂
Aorian'ny fanaovana an'io dia afaka miditra ny mpampiasa nefa tsy misy olana 😀
Ny fitaovana ampiasaintsika amin'izany rehetra izany (jailkit) ampiasaina amin'ny backend chroot, izay raha ny marina dia saika ampiasain'ny tutorial rehetra. Na izany aza, ny fampiasana JailKit dia lasa tsotra kokoa amin'ny tranokala 😉
Zava-dehibe!: Nosedraina ity Debian Squeeze (6) y Centos ary niasa amin'ny 100%, notsapaina tao amin'ny Debian Wheezy (7) ary niasa ihany koa izy io, na dia misy antsipiriany kely fotsiny aza, fa ny anaram-bosotra mpampiasa dia tsy aseho amin'ny ssh, fa tsy very fampiasa io.
Raha misy manana olana na misy zavatra tsy mandeha tsara dia avelao ny antsipiriany araka izay azo atao, tsy mihevitra ny tenako ho manam-pahaizana aho fa hanampy anao araka izay tratrako.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fomba fampidirana am-ponja ireo mpampiasa mampifandray amin'ny alàlan'ny SSH
Ka ho zavatra toy ny alalana ao amin'ny FTP izany? TENA
mahita foana izay rehetra tsy fantatrao akory ianao, toy ireo mpampiasa amin'ny MySQL xD
Tsy marina, satria ny SSH dia tsy mitovy amin'ny FTP. SSH dia akorandriaka, izany hoe terminal ... mety ho ao amin'ny terminal amin'ny solosaina na mpizara hafa ianao, afaka manatanteraka baiko, manomboka dingana, sns ... dia hanao betsaka araka izay avelan'ny administratera mpizara anao 😉
hahahahahaha nah tongava, inona no mitranga dia mamoaka zavatra ara-teknika bebe kokoa aho ... izany hoe tiako ny mamoaka zavatra kely tsy dia malaza sy mahaliana loatra. Ohatra, izaho manokana tsy mikasa ny hamoaka zavatra amin'ny andro hivoahan'ny Ubuntu vaovao, satria mino aho fa maro no efa hiresaka momba izany ... na izany aza, ny zavatra novakianao teto tamin'ny lahatsoratra, tsy zavatra vakiana isaky ny andro sa tsia? 😀
Fandraisana anjara tena tsara misaotra
misy koa protokol antsoina hoe sftp izay ftp sy Secure Shell miaraka, na dia tsy mitovy amin'ny fihazakazahana FTP amin'ny SSH aza: \_
Eny eny tokoa, fa amin'ny alàlan'ny fandefasana SSH dia voafehiko ho azy izay mampifandray amin'ny SFTP, satria hoy ianao, ny SFTP dia SSH + FTP raha ny marina.
Ny sary tsy hita !!! 🙁
Hadisoana kely nataoko hehe, lazao ahy izao 😀
Vonona. Misaotra 😀
tena tsara, tondroiko amin'ireo ankafiziko ny hampiasana azy rehefa ilaiko lol
Misaotra, misy fanontaniana na olana, eto hanampy anay izahay 🙂
Manana an'i Perseus ao anaty tranom-borona izy ireo. http://i.imgur.com/YjVv9.png
Fantatrao fa lohahevitra tsy dia haiko loatra izy io ary nanamarina tao amin'ny BSD (PC-BSD sy Ghost BSD) aho ary hitako fa tena mahaliana sy miaraka amin'ireo fiasa izay mety hahasoa tokoa.
Hotehiriziko io raha hojereko ary hojereko manohitra ny doc BSD. Misaotra amin'ny vaovao.
Tsy nahafantatra an'io koa aho, satria tsy nieritreritra ny hanome SSH fidirana amin'ny serivera iray akory aho haha, saingy rehefa hitako fa ilaina ny nanao izany dia te-hiditra aho nefa tsy nisy olona sendra nanao zavatra tsy nahy. tsy tokony izany 😀
Tsy mbola nanandrana an'io aho tamin'ny rafitry ny BSD, ka tsy afaka milaza aminao aho fa hahomby izany, fa raha mitady ny fomba hitsoka amin'ny BSD ianao dia tokony hisy zavatra hivoaka 😉
Misaotra ny hevitra namana 🙂
Salama, mampiasa FreeBSD aho ary mazava ho azy fa miasa any amin'ny seranan-tsambo ny jailkit
Apetrakao amin'ity baiko ity
cd / usr / ports / shells / jailkit / && manadio madio
Na amin'ny alàlan'ny fonosana ftp
Ao amin'ny configurement ihany (kira: x: 1003: 1003 :: / home / kira: / bin / bash)
Mila manampy tcsh na sh ianao, raha tsy hoe nametraka bash ianao ary ampio ity lalana ity
Ary andinindininy vitsivitsy kokoa, ao amin'ny Ghost BSD, ny dingana mitovy amin'izany dia tokony ho tsotra kokoa noho izy mifototra amin'ny FreeBSD
Tsara, nitady azy aho; hainao ve raha miasa any Centos ?? misaotra
Tsy mbola nanandrana azy io tao amin'ny Centos aho, saingy eny tokony handeha izy :)
Raha ny marina dia tadidiko fa maro no nampiasa an'io fitaovana io tamin'ny Centos sy mpizara Red Hat 😉
cyberalejo17 dia hoy izy:
Misaotra betsaka. Mivantana mankany amin'ny tsoratadidy.
Valiny amin'ny cyberalejo17
MV Altamirano dia hoy izy:
"Fetsy" tena tsara, tena ilaina ho an'ny mpitantana sys. Fa mbola tsara kokoa, voasoratra tsara. Inona intsony no tadiavinao.
Valiny amin'i MVAltamirano
Misaotra, misaotra betsaka tamin'ny hevitrao 😀
Derao SSH haha
Indray mandeha aho dia nanandrana nanao tranom-borona ho an'ny ssh fa amin'ny fomban-drazana ary ny marina dia tsy nivoaka tsara mihitsy. Raha nihazakazaka ny tranom-borona dia tsy nisy bash akory, izany hoe nifandray izy ary tsy nisy na inona na inona haha, raha mihazakazaka ny akorandriaka dia mety hiakatra ao amin'ny hierarchy lahatahiry ary quilombos maro hafa haha ​​fa giro ity jailkit ity, mandeha ho azy ireo zavatra rehetra ireo ... tena soso-kevitra
Eny, ny SSH dia mahavariana avokoa noho izay avelany ho antsika, izay tena tsy inona fa ny avelan'ny rafitra ... hooray ho an'ny Linux! … Haha.
nwt_lazaro dia hoy izy:
Salama, fanontaniana iray!
maninona no ovay ny trano avy amin'ny (1) / opt / jail /./ trano / kira ho (2) / trano / kira
Tsy maintsy manitsy ny rakitra sns / passwd an'ny tranom-borona isika, izany hoe, amin'ity tranga ity dia / opt / jail / etc / passwd, ao no anehoantsika hevitra momba ny tsipika mpampiasa noforoninay, ary manampy vaovao toy ny:
Raha atao teny hafa, dia toa izao ny fisie passwd:
(1) #kira: x: 1003: 1003: ,,,: / opt / jail /./ trano / kira: / usr / sbin / jk_lsh
Valio i nwt_lazaro
Raha tsy napetraka izany dia tsy mandeha ny fidirana SSH, manandrana mampifandray ilay mpampiasa fa voaroaka ho azy ... toa hadisoana na olana amin'ilay mpandika teny entin'ny JailKit, satria rehefa manao io fanovana io dia milaza azy hampiasa ny rafitra bash mahazatra, mandeha daholo ny zava-drehetra.
Omar ramirez dia hoy izy:
Mbola manidy ny session ssh aho: C
Valiny tamin'i Omar Ramirez
Alexitu dia hoy izy:
Salama aho nametraka an'ity ary miasa saina tena tsara amin'ny centos = D
fa ny dua-ko dia toy ny taloha mba hanisy baiko hafa ohatra amin'ny mpampiasa fonja
tsy afaka mihazakazaka baiko svn co http://pagina.com/carpeta
Midika izany fa tsy misy io baiko io ho an'ireo mpampiasa fonja amin'ity tranga ity toy ny taloha mba hanampiana ireo baiko ireo any amin'ny fonja ary misy maro hafa izay mila ampiako.
Valiny tamin'i Alexitu
Raha te hampandeha ny baiko «svn» ao amin'ny fonja ianao dia manana ny jk_cp baiko
Ity fiheverana ity fa ny binary binary na azo ampiharina dia: / bin / svn
Ary avelao ny Cage / Jail: / opt / jail /
Ho hitanao ny baiko miankina amin'ny hafa, izany hoe raha ampidirinao ny «pepe» dia ho hitanao fa tsy maintsy ampiana «federico» koa ianao, satria «pepe» dia miankina amin'ny «federico» hovonoina, raha hitanao izany dia ampidirinao ny baiko ilaina ary efa 😉
Tena tsara izany, andramako miaraka amin'izay, ary lazaiko aminao ny zava-nitranga, misaotra betsaka = D
Nahavita nanao izay nolazainao tamiko aho fa tamin'ity fomba ity ary tonga dia hitany fa tsy nisy olana. Io no baiko izay azoko ampiasaina amin'ny fampiasana ilay subversion.
Eny ary mampiasa centos xP aho ary mety hafa noho izany fa tsara
izao dia tiako ho fantatra hoe iza amin'ireo trano famakiam-boky toa an'i svn fa izao aho te-hanangona satria andao hatao hoe mila mampiasa baiko toy izao aho
./fanamboarana ary hadisoana marika
./configure.lineno: andalana 434: expr: baiko tsy hita
Tsy ho fantatro hoe iza ireo trano famakiam-boky efa napetrako izay MySQL sy ny hafa raha toa ka manangona any ivelan'ny fonja izy io fa tsy ao anatin'ny jaui.
miala tsiny amin'ny fanelingelenana.
ps: tokony apetrakao ao amin'ilay torolalana ny nolazaiko taminao momba ny baiko ampiasaina amin'ny centos =) arahabaona.
Jereo, rehefa lazaiko aminao fa tsy mahita baiko (toy ny eto) ny zavatra voalohany dia ny mahita ny baiko:
Raha vao hita (/ usr / bin / expr ary / usr / bin / X11 / expr) dia adikao amin'ny fonja amin'ny jk_cp 😉
Andramo ity raha hahita.
Ie, efa manitsy ny lahatsoratra aho ary manampy fa miasa ao amin'ny Centos 😀
Misaotra betsaka (:
Misaotra amin'ny fidirana…
karma dia dia hoy izy:
Salama manao ahoana ianao?
Mamaly an'i karma
djfenixchile dia hoy izy:
Fitiavana! Avy any Chili ny arahaba. Kisoa toa ahy ianao! TPT!. Fifamihinana. Tena nanampy ahy ny hafatrao!
Mamaly an'i djfenixchile
Misaotra betsaka anao tamin'ity lahatsoratra ity, nanampy betsaka ahy izany, saingy indrisy fa amin'ny ampahany amin'ny
// ///.... // // // ///. // ///. // ///. // ///.
Mahatonga ahy hadisoana iray ihany izany, tiako holazaina, avelako toy ny misy azy io, ary manafoana ahy avy eo amin'ny terminal rehefa mampifandray ,,, .., maneho hevitra amin'ilay tsipika aho ary manampy iray hafa manova azy araka ny natoronao azy, ary koa manaingo ahy….
Ampidiro ny kinova farany "jailkit-2.16.tar", mamorona script aza hitehirizana fotoana, eto ambany:
// ///.... // // ///...
// ///.... // // // ///.
Mazava ho azy fa miditra amin'ny "root" aloha ...
Ahoana no hamahako ny lesoka namana ????
Miala tsiny, efa azoko ilay izy, nanao hadisoana momba ilay fampirimana Home aho, saingy manana fisalasalana lehibe aho, ahoana no hahazoako azy hamela ahy hanatanteraka ny «écran» baiko, manandrana mampiasa azy aho (amin'ny mpampiasa voafatotra) , saingy tsy mandeha ... zavatra iray hafa dia ny ,, ahoana no hataoko mba hikirakira ity programa divay amin'ny exe izay vao napetrany tao an-tranony ity, mpampiasa ahoana no ahoana?
Leonel dia hoy izy:
salama, tuto tsara be! Vaovao aho amin'ireo tontolo iainana ireo, manana fanontaniana aho ...
Mikasika ny fiarovana, hitako fa ao anaty fotony dia misy lahatahiry maro, ilaina ve izany? Tiako fotsiny izy hanana fidirana amin'ny folder-ny (ftp-upload and ssh-executive) hanatanterahana rindranasa, inona ireo lahatahiry mety hofafany avy amin'ny faka? sa maneho loza izany amiko? Ankasitrahako mialoha ny fanampianao, arahaba!
Mamaly an'i leonel
CubaMena dia hoy izy:
@ KZKG ^ Gaara, misaotra anao nametraka ny hadisoana wheezy ianao nefa miaraka amin'ny kinova jailkit-2.16.tar.gz izay nolazainao fa natombok'izy ireo
Valiny tamin'i CubaRed
Mieritreritra aho fa hampita izany amin'ny PDF, jojo .. ho any cage ary misaotra wn thanks
Miarahaba namana, manana fanontaniana aho:
Aoka hatao hoe manana mpampiasa antsoina hoe "test" isika.
Ny fanontaniana dia, ny rakitra /home/test/.ssh/known_hosts izay hita ao an-tranon'io mpampiasa io, io rakitra io ihany ve no tsy voafehin'ny mpampiasa?
Andramo ity. Azo atao amin'ny alàlan'ity fomba ity ny mametra ny fivezivezena mankany amin'ny tranon'ny mpampiasa hafa.
Valiny tamin'i Richart
TZBKR dia hoy izy:
Voalohany indrindra, misaotra tamin'ny lahatsoratra! Tena mahasoa ahy izy io; saingy manana fisalasalana roa aho, ary izany dia avy amin'ny scenario izay ananako:
Mila mamorona mpampiasa N manana fidirana tsy miankina sy tsy miankina amin'ny tranony aho, ny mpampiasa tsirairay dia tsy mahazo miditra amin'ny tranony fotsiny mba hametraka, hanova sy hamafa ireo rakitra ao anatiny nefa tsy mila mivezivezy amin'ny hafa (efa ananako io teboka io). Tsy mila fidirana amin'ny alàlan'ny ssh.
1. Mila mamorona tranom-borona ho an'ny mpampiasa tsirairay ve ianao, sa misy fomba iray ahafahan'ny mpampiasa samy hafa ao anaty tranom-borona iray nefa samy manana ny lahatahiry "manokana"?
2. Rehefa miditra (amin'ny alàlan'ny client FTP) dia aseho daholo ny lahatahiry noforonin'ilay fitaovana, misy fomba hanehoana ny fisie madio? Sa nisy zavatra tsy nety nataoko teny an-dàlana?
Valiny amin'i TZBKR
eduardlh dia hoy izy:
Tutorial tena tsara! Tena nanampy ahy tokoa izy io, andramako azy amin'ny kinova 2.17 ao amin'ny Ubuntu 14.04 ary tena mandeha tsara izany. Ankehitriny dia manana izao fanamby manaraka izao aho, raha vao migadra ilay mpampiasa ka tsy afaka mifindra amin'ny làlan-kaleha izy, tiako ho tsy mahita afa-tsy ny atin'ny rakitra iray izay misy lalana hafa izy. Nanandrana tamin'ny rohy an'ohatra aho fa rehefa manandrana manao rambony na saka amin'ity rakitra ity dia milaza amiko fa tsy misy izy io na dia rehefa miditra amin'ny mpampiasa aza aho dia afaka mitanisa an'io rakitra io ao an-tranon'ny tranom-borona.
Raha afaka manampy ahy ianao dia ho feno fankasitrahana aho, misaotra mialoha
Mamaly an'i eduardlh
Salama, efa nanaraka ny boky torolalana iray manontolo aho ary rehefa miditra amin'ny ssh dia mikatona ho azy, manoritra:
4 Des 19:20:09 toby sshd : tenimiafina nekena ho fanandramana avy amin'ny 172.16.60.22 seranan-tsambo 62009 ssh2
4 Des 19:20:09 toby sshd : pam_unix (sshd: session): nisokatra ny andrana ho an'ny fitsapan'ny mpampiasa (uid = 0)
4 Des 19:20:09 toby jk_chrootsh : miditra am-ponja / opt / jail amin'izao fotoana izao ho an'ny fitsapan'ny mpampiasa (1004) miaraka amin'ny adihevitra
4 Des 19:20:09 toby sshd : pam_unix (sshd: session): mihidy ny andrana ho an'ny fitsapan'ny mpampiasa
Valio i yas
Tsy rehefa manao ny dingana farany amin'ny fanomezana ssh fidirana amin'ny mpampiasa aho dia manidy ny fifandraisana hatrany 🙁
Mety ho avy amin'ity mpampiasa ity ve no namorona fanovana ho faka? ny -root? tsy mamela ahy io. Ahoana izany? Misaotra anao tamin'ny fanampianao
Misaotra betsaka anao amin'ny tutorial, nilaiko izany hamoronana mpampiasa afaka mampiasa clonezilla hanamboarana sary ary handika azy io amin'ny mpizara fahatelo nefa tsy afaka mirohondrohona na aiza na aiza no tadiaviny
Tsara! Mila mila mahalala zavatra aho.
Azo atao ve ny miditra ho ROOT mampiasa FTP ary manana ireo alalana ireo, hitantana azy amin'ny FTP fa tsy amin'ny SSH? Andao lazaina toy ny famoronana fifandraisana, ny fomban'ny tonelina na toy izany. Ahoana no fomba anaovana azy? Fanamboarana ny fisie VSFTPD?
Ubuntu 13.04 dia efa manana anarana ary ho avy tsy ho ela ny "Quantal Quetzal"
Pandoc sy ireo fahagagana tsy fantatra